Mpempe akwụkwọ Turkish na-ere Transwa na Onye na - ebugharị ụwa na ngwaahịa eletriki na ụwa - RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulBzụ ahịa Turkish na-ere Turkishwa
13 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 34 Istanbul, ụgbọ okporo ígwè, General, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey 0
Branddị ndị Turkish na-eresị ụwa ụlọ na ngwa eletriki
Turkey Elektra ngwá electronic ụlọ ọrụ na-eduga ika nke ngwá electronic, transformer na-emepụta kpamkpam na isi obodo na ibu oru ngo 6 60 Afrika na mba na-enye elu uru-kwukwara na kọmputa na ngwaahịa. Ngwa ụlọ dị ka Istanbul New Airport, Sabiha Gokcen Airport, isi TCDD na ọrụ ụgbọ oloko dị elu, ụlọ ọgwụ Marmaray na obodo, Elektra Elektronik, ngwaahịa ndị dị na mba ndị ọzọ dị ka okporo ụzọ ụgbọ oloko China, ihe mkpofu mmiri nke Guangzhou, Mịnịsta ọkụ eletrik na ụlọ ọrụ Russia na ígwè. anopụtala. N'afọ 3 gara aga, Elektra Elektronik nwetara ọfụma dị ukwuu site na ịnye oke elele nke ike n'ọdụ ụgbọ mmiri dị n'etiti arụmọrụ okporo ụzọ ụgbọ ala na nke mba ọzọ wee bulie uto uto na 20 ma nweta uto 2018 na 25 ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga. Elektra Elektronik, otu n'ime ụlọ ọrụ ndị Turkey na-adịghị ahụkebe nke nwere ike iresị China ngwaahịa, nwere ụlọ ọrụ ịzụ ahịa na China na America yana otu ụlọ ọrụ dị na Germany. Na-ekwupụta 2019 dị ka “Afọ nke Ihe itunanya”, ụlọ ọrụ ahụ matara itinye ego ga-eme ka okpukpu abụọ nke ọrụ ya dị na Esenyurt, Istanbul. 40 anọwo na-arụpụta atụmatụ, injinịa na imepụta ngwaahịa ya site na ọrụ R&D siri ike ruo ọtụtụ afọ, na-achọ ịmalite usoro nke ịghọ “Elektra Electron R & D Center ında na 2020.
Mmepụta ike, ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ na mbupụ ruru na okwu nke na-eduga ala-voltaji transformer na chernobyl oru na Turkey ike Elektra Elektronik, ma domestically na-ewu ụlọ ná mba ọzọ, okporo ígwè na usoro, eletriki, ngwá electronic, akpaaka, ọtụtụ dị iche iche ndi na elu teknụzụ dị ka robotics na mmiri ngwaahịa ya dị iche. 6 kọntinenti 60 dị na obodo ahụ na nnukwu ọrụ a rụpụtara kpamkpam na mgbanwe ụlọ nke ụlọ na ngwaahịa elektrọn Elektra Electronics; Turkey na Istanbul New Airport, Sabiha Gokcen Airport, TCDD Neomi na ngwa ngwa ụgbọ okporo ígwè oru ngo, na-adọrọ uche ndị na-adịrị oru dị ka Marmaray na obodo ụlọ ọgwụ. Elektra Elektronik nwere ụlọ ọrụ ịzụ ahịa na China na America yana otu ụlọ ọrụ dị na Germany; Site na ngwaahịa ọhụụ ya, ọ bụ onye ọkpụkpọ dị mkpa na ọrụ ụwa nile dịka ụzọ ụgbọ oloko China, oru mkpofu mmiri nke Guangzhou, Electriclọ ọrụ ọkụ eletrik nke Serbian na igwe na igwe nchara.
Na-ere ngwaahịa elektrọnikụ mepụtara kpamkpam na isi obodo na China
China anamde ahịa nke na kọmputa na ngwaahịa adịkarịghị mesiri ya ike na ha nwere n'etiti ndị Turkish ụlọ ọrụ Elektra Electronics General Manager Emin Onyinye Sakar, nakwa na a Certificate Mankeumman na-eme ka o kwe omume na mbupụ na United States na nkesa na ngwa agha oru na Turkey ya n'olu pụta ìhè na otu ụlọ ọrụ. Armağan Şakar kwuru na kemgbe 2016, ha enwetala nnwale dị omimi na arụmọrụ nke ike ike n'ọdụ ndị dị n'etiti ọrụ ụgbọ okporo ígwè ụlọ na nke mba ọzọ wee kwuo, iyle site na mmetụta nke ọrụ ndị a, anyị emeela ka uto uto nke ụlọ ọrụ anyị na 3 n'afọ gara aga 20. Na 2018, anyị nwetara uto 25 site na pasent tụnyere afọ gara aga. ”
Oké ọchịchọ na-arụ ọrụ okporo ụzọ
Şakar kwupụtara na ha kwụpụrụ na ngwaahịa ha ejiri rụọ ọrụ na ọdụ ụgbọ oloko na China wee gbakwụnye, "N'ime ọrụ ụgbọ oloko ụlọ nke Elektra Elektronik, Konya-Ankara akara okporo ụzọ dị elu, IKZ (Irmak-Karabük-Zonguldak), İZMİR Selçuk-Çamlık akara, EKB (Eskişehir-Kütahya-Balıkesir) akara, akara SAKA (Samsun-Kalın), akara BAME (Bandırma-Balıkesir-Menemen), akara BAŞKENT RAY (AT), Ankara Northern Sincan akara na Ankara Northern Speedcan mmezi ụgbọ, etiti Thrace (Edirne- Ọ sịrị, ụgbọ okporo ígwè Uzunköprü Tekirdağ-Pehlivanköy na Kayseri-Sivas-Çetinkaya GSM-R, "ka o kwuru.
Na-akwadebe ịghọ R & D Center na 2020
N'ikwu na ha bụ ụlọ ọrụ nwere ahụmahụ na mpaghara elektrọn na afọ 40, Şakar kwupụtara na ha ghọtara atụmatụ, injinịa na mmepụta nke ngwaahịa ha n'ụlọ nke aka ha. Şakar kwuputara na nsonaazụ R&D siri ike, ha nwetara ọkụ na ngwaahịa ịsụ ụzọ na igwe na-agbanwe, na-ahụ maka ngwa eletriki na kọmpụta ma kwupụta na ha na-achọ ịmalite usoro nke ịbụ “Elektra Electron R & D Center X na 2020. Akar kwupụtara na a na-ahọrọ ha nnukwu ọrụ dị iche iche n'ihi eziokwu ahụ bụ na ha bụ aha ama ama na Turkey na mba ofesi yana ikike ọrụ ha. "Teknụzụ, anyị nwere ike imezu nkọwa nke ọrụ ahụ. Site na asambodo di iche-iche nke mba anyi, ikike elu anyi, nkwado oru anyi tupu izu ahia na obere oge nnyefe anyi, ulo ulo na uwa nile anyi n’ezi oru biputa ihe nke Elektra dika ihe ngbanwe, mmeputa ihe na ngwa elektrọnik n’ego ha a ma ama.
Ike ikike nke ụlọ ọrụ ahụ okpukpu abụọ
N'ikwu na 50 pasent nke ntụgharị nke ụlọ ọrụ mejupụtara ahịa ụlọ na pasent 50 nke mbupụ, Şakar kwupụtara na ha kwupụtara afọ 2019 dị ka “Afọ Leap birlikte na mmụba ngwa ngwa na mpaghara ahịa mba ọzọ na oke azụmaahịa. N'ọnọdụ a, Şakar kwupụtara na ọrụ maka itinye ego ahụ ga-eme ka okpukpu abụọ nke ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na Istanbul Esenyurt ruo mita 10 puku na-aga n'ihu ngwa ngwa. Şakar kwupụtara na ha chọrọ imezue uto na nrụzigharị ọrụ na ụlọ ọrụ na njedebe nke afọ 2019 nakwa na ha na-ahụ uto n'etiti 2020 na 70 site na ịbawanye ọnụego mbupụ na 10 na 15.
Edenyewo nkwekọrịta na ụlọ ọrụ ahụ meriri obi ebere maka Project nke 154 kV ENH Ịlapụ na Bor Trafo Center, Araplı Substation na Boğazköprü Transformer Center 26 / 02 / 2015 TCDD 6. Bor Substation ka, Araplı Substation na Nzipu Line ndọrọ ego Boğazköprü kV Substation ka 154 Project ewu nkwekọrịta e banyere obi-eto eto Kurtmakas Eletrik Turkish State Railways (TCDD) 6. Regional Directorate site 12 November 2014 ụbọchị àjà anakọtara, "Boğazköprü - Ulukışla - Yenice, Mersin - Yenice - Adana - Toprakkale Electrification Project n'ime Akporo FDI Bor Substation, FDI Araplı Substation na FDI Boğazköprü Substation ka 154 kV Nzipu Line ndọrọ ego mere" e dere ihe ọhụrụ. Dika ozi ndi natara site na Investments Magazine; Ọnụ ego dị ntakịrị 1.371.662 i
Turkey si Economic Rise Nwere Njikọ Domestic Product ojiji 06 / 12 / 2016 Turkey si Economic Rise Nwere Njikọ Domestic Product Iji: V a na-haziri TÜSAYD. Turkey Ịzụta na Tụkwasịnụ Management Summit, "Strong Turkey Ụmụ Amaala onsite Sourcing maka" domestically na isiokwu na ada ọnụ ị nweta ọkachamara si mba ọzọ. 3 Nzuko ahụ, nke a na-eme na December, na-akwado ọganihu nke akụ na ụba mba na ikike mkpebi ịzụta nke USD USD 25. The Yönetic 6 Na-ahazi na ndị na-azụ ahịa na ndị ọkachamara na-azụ ahịa (TÜSAYDER), nke na-apụta na ọhụụ nke ịghọ ọkwa ụlọ akwụkwọ na ọrụ ịzụ ahịa na nchịkwa mba na nke ụwa na ozi nke ịme ka ọrụ ịzụ ahịa dị ike n'ime usoro nke ịzụ ahịa ịzụ ahịa. Nchịkọta Mgbasa Ozi na Nnyefe Enyemaka bụ
Ndị mbụ na-emepụta Ụlọ Ọrụ Na-arụpụta Ụlọ Ọrụ nke Turkey 08 / 09 / 2018 Series Bipụta mbụ anụ ụlọ xnumx.türkiye Car: ANADOL mara ya mmasị ụgbọala Vehbi Koc, otu n'ime zaa nke Turkey bụ na-emepụta ya ụgbọala. Mgbe 1 afọ na Ford Motor Company nnọchiteanya na Turkey, a họọrọ, na Vehbi mgbe a ịrịba adımdı.xnumx afọ iru nchịkwa mgbaru ọsọ na-aghọta nke a mgbaru ọsọ, ọ na-enwe okwu na Ford na malitere ọrụ. A maara na ma ụlọ ọrụ ahụ dị oke oke ma ọrụ a dị oke ọnụ. Òtù Koç gbalịrị iru ọchụchọ ọhụrụ na ngwọta dị mfe. Na 1946 (onyeisi ndị isi na-ahụ maka ụgbọala) Bernar Nahum na Rahmi Koç dị iche iche üzerinde
Altepe: Anyị egosila na silkworm nwere ike ịbụ Turkish brand n'ụwa nile 07 / 12 / 2013 Nke a gosiri na o nwere ike ịghọ turkorm nwere ike ịghọ Turkish na-eme n'ụwa nile. Ma ọ bụ onye isi obodo Turkey bụ Recep Altepe, a na-emepụta Turkish Turkish. o kwuru. Altepe kwusiri okwu ike na ọ dị mkpa maka ụdị ụdị ọhụrụ ndị a iji debe ihe onwunwe na mba ahụ. 2 50 kilogram ụgbọelu na Turkey na-akụkụ tr mkpụrụ exported mkpa echetara President Altepe, iji belata ihe nke technology kwuru na ha ntị ka ojiji nke ụlọ technology ka mepere municipalities. ...
Edenyewo nkwekọrịta na Tarsus Substation na Pozantı Transformer Center maka 154 KV ENH 19 / 02 / 2015 TCDD 6. Substations na Pozantı Tarsus 154 kV Substation na OHL ndọrọ ego Project aka a nkwekọrịta na ndị na-ewu obi-eto eto-Tek Energy Turkish State Railways (TCDD) 6. Regional Directorate of 07 November 2014 ụbọchị àjà anakọtara, "Boğazköprü - Ulukışla - Yenice, Mersin - Yenice - Adana - Toprakkale Electrification Project n'ime Akporo FDI Tarsus Substation na FDI Pozantı Substation ka 154 Kv Nzipu Line ndọrọ ego nke na-eme ka" ọhụrụ metụtara ndị ị nweta Mmepe edere. Dika ozi ndi natara site na Investments Magazine; a kpebisiri ike ịkwụ ụgwọ ya dịka 1.029.904 TL gbasara UM
A National National na National ụgbọala mepụtara na GEN ika 20 / 10 / 2018 E gosipụtara ụgbọ ala eletriki eletrik na R & D na Innovation nzuko a na Istanbul maka oge mbụ. Ike Engine na 150 Kw, a na-eji ịnyịnya ígwè 203 ịnyịnya ígwè 5 nke 6,5 rụọ ọrụ na R & D n'afọ. 6 na-ekwu na mmepụta ngwongwo nwere ike ịmalite ọbụna mgbe ọnwa gasịrị. TM 480i 100 na-eji 10 pound kwa kilomita. Imepụta ime ụlọ, imepụta mpụta, imepụta ihe eji arụ ọrụ na-arụ ọrụ n'ime ụlọ. Mgbagharị ụgbọala, akụrụngwa electronic niile nchịkwa na ngwanrọ bụ GEN auto. GEN na ụgbọ ala 2014 Gürsel Güzel malitere ntọala ya na% 100 anụ ụlọ. Nlereanya mbụ nke ule ugbo
A gwara ụlọ ahịa TCDD na-agbachitere onye ahịa na-ere mmanụ na-akwadoghị iwu 17 / 09 / 2013 A gwara onye na-ere ahịa na-ere iwu na-akwadoghị iwu TCDD iji chebe ụgbọ okporo ígwè. Ejiri mmanụ ụgbọala na ụlọ ọrụ TCDD na onye na-ere ahịa na-ere ya ọtụtụ ijeri dollar na-akpata ụkọ ego na ụlọ ọrụ mmanụ ụgbọala amaghị otú e si egbochi njide. Energy Market Regulatory Authority (EMRA), nke e bipụtara na Gazette Gazette, ndị na-azụ ahịa nke ndị ahịa na-ekpughe. N'ihi nyocha ahụ, EMRA kwụrụ ihe karịrị otu puku ụlọ ọrụ na-ere ahịa na ndị na-ere ahịa ma rịọ ka ha chebe ha. E nwere ndị na-ere ahịa na tank na-ekpuchi, na-agwakọta mmanụ nke nwere ihe nnu na diesel na peturuolu ma jide ya na tankị tank mmanụ 10. EBARA N'ỤLỌ NCHE
TCDD's Hangar ga-agbanwe n'ime ihe ndị dị na ngwaahịa 05 / 05 / 2014 A ga-agbanwe TCDD Hangar n'ime ihe ndị na-emepụta ihe ndị dị n'ime ala: A na-eme ka ndị na-emepụta TCDD na Nazilli na-agafe ebe a ga-ere ngwaahịa ngwaahịa mgbe a rụgharịrị. Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Gọvanọ Mehmet Okur mere nnyocha n'ime ndị na-emepụta, ndị isi natara ozi gbasara ọrụ ahụ. Okur wee kwuo, sị, "Ebe a anọghị na-abaghị uru ruo ọtụtụ afọ, enweghi ya ma gbahapụ ya ka ọ ghara ịla n'iyi. N'ihi ọrụ ahụ anyị kwadoro ya na Òtù Na-ahụ Maka Nlekọta Obodo Nazi nke Nazilli, ụlọ a iji zọpụta site na ire ere na ime ka akụ na ụba anyị ...
Nkwuputa: Usoro mmezi nke TQLOMSAŞ nke Ngwa na R & D Ọfịs Ụlọ na Old ÜPK Office 24 / 10 / 2016 TULOMSAS ochie mmepụta atụmatụ na ịchịkwa Department na ngwa na Product R & D Department modernization TULOMSAS General Directorate of Building TULOMSAS ochie mmepụta atụmatụ na ịchịkwa Office nke ngwa na Product R & D Department modernization nke ọrụ owuwu nke ụlọ 4734 Mba ga-ọdịda site na-emeghe obi dị ka 19 edemede nke Public Procurement Act. A na-enye nkọwa zuru ezu banyere obi ebere dị n'okpuru. Obi Registration Number: 2016 / 434614 1-Administration a) okwu: Ahmet okuko Avenue 26490 Tepebasi / ESKİŞEHİR b) Telephone na fax nọmba: 0 (222) 224 00 00 / 4435-4436 - 0 (222) 225 50 60 - 225 72 72 c) Kọmputa ...
Nkwekọrịta Mgbapụta: A ga-azụta ihe ngosi ihe eji emepụta ihe na kọmputa na ngwaọrụ kọmputa 28 / 04 / 2014 TCDD Directorate 2.BÖLG egosi ihe maka electronic kaadị na kọmputa akụrụngwa natara AGAGHỊ obi-enye isiokwu na yiri GBASA edemede 1- Ozi on eme kwadoro 1.1. Onye na-azụ ahịa nke ụlọ ọrụ; a) aha: TCDD 2.BÖLG Directorate ngwongwo na Services Procurement Commission b) okwu: Behicbey / ANKARA c) Ekwentị nọmba: 0312 211 14 49 d) Fax nọmba: 0312 211 12 25 e) E-mail address: bsrmeletl na @ gmail .com f) Aha / aha nna / aha nke ndị ọrụ ahụ metụtara: Basri MELETLİ / Onye Nlekọta Nhazi 1.2. Ndị na-azụ ahịa kwesịrị ịkpọtụrụ ndị ọrụ ahụ na adreesị na ọnụ ọgụgụ dị n'elu.
Usoro mmepe ngwa ngwa
Edenyewo nkwekọrịta na ụlọ ọrụ ahụ meriri obi ebere maka Project nke 154 kV ENH Ịlapụ na Bor Trafo Center, Araplı Substation na Boğazköprü Transformer Center
Altepe: Anyị egosila na silkworm nwere ike ịbụ Turkish brand n'ụwa nile
Edenyewo nkwekọrịta na Tarsus Substation na Pozantı Transformer Center maka 154 KV ENH
A gwara ụlọ ahịa TCDD na-agbachitere onye ahịa na-ere mmanụ na-akwadoghị iwu